Qiimaynta Khasaaraha Rayiidka ee Taliska Mareykanka Afrika ee Rubacii Afraad
By U.S. Africa Command Public Affairs , United States Africa Command Stuttgart, Germany Nov 10, 2020
Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa dhameystiray qiimeyntii rubacii afraad ee khasaaraha rayidka, tan oo qayb ka ah ballanqaadka taliska ee hagaajinta daah furnaanta iyo isla xisaabtanka iyo ka warbixinta eedeymaha khasaaraha rayidka. Tani waa warbixintii saddexaad ee qiimeynta khasaaraha rayidka tan iyo markii Taliska Mareykanka ee Afrika (USAFRICOM) uu bilaabay sii deynta warbixinnada saddex biloodlaha ah bishii Abriil 2020.
Intii lagu guda jiray rubacii lasoo dhaafay, taliska wuxuu sii waday habeeynta Bogooda internetka, si ay luuqado kala duwan uga helaan cabashada dilalka Madaniga ah islamarkaana u hagaajiyaan xiriirka Kooxda qiimeeynta khasaaraha rayidka iyo dadka ay khuseysoee heer gobol iyo heer caalami daneeya.
Intaa waxaa dheer, taliska wuxuu si joogto ah u sii deynayaa macluumaad iyo war saxaafadeedyo lagu soo saarayo luqado kala duwan si loo ballaariyo faafinta macluumaadka muhiimka ah.
Taliska ayaa sii wadaya ballanqaadkiisa ah inuu wiiqo awooda al-Shabaab oo ay ku qorsheeyaan kuna fuliyaan weerarada qorsheyn iyo hawlgallo dibadeed Weerarka USAFRICOM waxaa loo qaadaa taageerada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo taageerida danaha amniga qaranka Mareykanka.
Taliiska ciidamada Mareekanka rubuc afar (4) waxaa ey ogu bilaamatey bilaawmatey afar (4) kiis oo eedeymo oo kusaabsan laba dhacdo oo cusub oo suurtagal ah, isagoo kudaray laba (2) kiis oo cusub wadar ahaan lix (6) kiis Ayaa u furan. USAFRICOM sidoo kale waxay heshay lix eedeymo dheeri ah oo kusaabsan hal dhacdo oo horay loo soo sheegey.
Saddexdii bilood ee la soo dhaafay, Hogaanka Mareekanka ee Afrika waxay xukuntay saddex kiis. Taliska ayaa dhameystiray qiimeynta seddex dhacdo oo dad rayid ah waxyeelo kasoo gaartay, iyo kiis rubacii 3-aad u furnaa
Saddex dhacdo ayaa wali furan oo dib loo eegayo, oo ay ku jiraan labo ka mid ah warbixintii hore.
Kadib qiimeyn dhab ah oo ku saabsan xaqiiqooyinka iyo duruufaha jira, USAFRICOM waxay cadeysay mid kamid ah dhacdooyinkan inay keentay labo dhaawac oo dad rayid ah oo laxiriira duqeyn diyaaradeed Febraayo 17, 2020.
"Waxaan shaqaaleynaa duulaan adag iyo geedi socod qiimeyn ah inta aan ku shaqeyneyno jawi adag oo dhib badan," ayuu yiri Gen. Stephen Townsend, oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika. “Waxaan diiradda saareynaa in la yareeyo Al-Shabaab, in la carqaladeeyo howlahooda oo aan saameyn ku yeelano awooda ay u leeyihiin qorsheynta iyo weerarada. Nasiib darro intii aan hawshaas wadnay, waxaan qiimeynaynaa dhaawacyada laba qof oo rayid ah oo dhacay intii lagu jiray duqeyn diyaaradeed Febraayo 17. ”
Dhacdadii 17-kii Febraayo, 2020, ee khasaaraha rayidka waxaa loo gudbiyay Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho, Koongarayska Mareykanka, iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Muddo 38 sano ah oo aan khibrad u lahaa, oo ay ku jiraan hawlgallada dagaal ee Afghanistan, Ciraaq iyo Suuriya, weligay ma arag dadaallo badan oo xanuun badan oo la doonayo in si sax ah loogu dhufto isla markaana loo xaddido waxyeello kasta oo loo geysto dadka rayidka ah, ayuu yidhi Townsend. "Dadaalladeena ku aaddan hoos u dhigista hanjabaadaha argaggixisada ee halista ah iyadoo sidoo kale laga fogaanayo sababaha shacabka iyo inaan daah-furnaan lahayn waa kuwo aan barbar-socon."
Farqiga u dhaxeeya Qiimeenta khasaaraha rayidka iyo Taliska ciidamada mareekanka ee Afrika iyo Hayadaha aan dowliga aheen (NGO)
Macluumaadka taliska wuxuu ku saleysan yahay ilo sirdoon oo la isku halleyn karo oo ey shacabka arki karin. Tani waxay gacan ka geysan kartaa kala duwanaansho la dareemay oo u dhexeeya natiijooyinka hogaanka iyo qeybaha kala duwan hogaamiyaasha kale-. Intaa waxaa sii dheer, Taliska Mareykanka ee Afrika, oo kaashanaya Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho, waxay la shaqeeyaan hoggaanka Soomaaliya iyo hoggaamiyeyaasha bulshada si loo qiimeeyo kiisaska la soo sheegay ee dhimashada rayidka.
Xaaladaha dhulka ee masuuliyada USAFRICOM iyo dhaqdhaqaaqyada ururada xagjirka ah ee rabshadaha wata waxay inta badan xadidaan gelitaanka meelaha ay Hogaanka Mareekanka ee Afrika ka fuliso hawlgalada militari ama weerarada cirka. Si kastaba ha noqotee, Hogaanka Mareekanka ee Afrika waxay adeegsataa dhammaan aaladaha macquul ah ee la heli karo si ay u qiimeyso warbixinnada khasaaraha rayidka, oo ay ku jiraan sirdoonka, ka warbixinta ilaha furan, iyo wax-soo-saarka dadweynaha iyo bulshada aan dawliga ahayn.
“Qeexida "rayid" iyo "dagaalyahan"
Iyadoo la waafajinayo sharciga u qoran Wasaaradda Gaashaandhigga ee dagaalka, madaniga iyo dagaalyahanka waxaa loo qeexay sidan:
Riyiidka: Dadka aan dagaalka ku jirin (xubnaha millatariga / ciidamada amniga ama xubno ka tirsan xoogag cadaw ku dhawaaqay ama koox hubeysan oo abaabulan oo ka mid ah dhinacyada isku dhaca hubeysan). Dadka rayidka ah way waayi karaan difaacooda ka dhanka ah weerarada hadii ay muujiyaan ujeedo cadaawadeed, ku kaca fal cadowtinimo, ama waqtigaas oo ay si toos ah uga qeyb qaataan dagaalada; laakiin waxay hayaan ama dib uhelaan ilaalin ceynkaan oo kale ah markay joojiyaan dhaqanka la sheegay, ama hadii ay noqdaan dhaawac, jirro, xirid, ama is dhiibid, sidaa darteedna aysan awoodin inay sii wadaan dhaqankaas. Dhammaan shaqaalaha jooga aagga ay mas'uulka ka tahay Taliska Ciidanka Mareekanka ee Afrika waa kuwo rayid ah oo la ilaaliyo, haddii aan si wanaagsan loogu aqoonsan bartilmaameedyo milatari oo sharci ah.
Persons who are not combatants (members of military/security forces or members of either a declared hostile force or an organized armed group of a party to an armed conflict). Civilians may lose their protection against attacks if demonstrating hostile intent, engaging in a hostile act, or for such time as they take direct part in hostilities; but they retain or regain such protection when they cease said conduct, or if they become wounded, sick, detained, or surrender, and thereby are unable to continue said conduct. All personnel in the USAFRICOM area of responsibility are protected civilians, unless they are positively identified as legitimate military targets.
Dagaal: Dadka toos uga qayb qaadashada iskahorimaadyada hubeysan, ama dadka ficilladooda cadowtinimada ku dhisan ay si ula kac ah iyo si maadi ahaan ah u taageereen dagaallada ka dhanka ah Shakhsiyaadka Mareykanka ee sida rasmiga ah ama ka shaqeynaya qayb ka mid ah koox hubeysan oo aan ka tirsaneyn Dawladda oo ku hawlan dagaalka ayaa laga dhigi karaa ujeeddada weeraraan sababtoo ah waxay sidoo kale la wadaagaan ujeedada cadaawadeed ee kooxdooda.
Warbixinta Saddex-biloodlaha ee Qiimaynta Khasaaraha Rayiidka ah ee Taliska Mareykanka ee Afrika
Natiijooyinka oo Kooban
Warbixintani waxay ka tarjumaysaa natiijooyinka qiimaynta khasaaraha rayidka ee hore loo soo sheegay inay furan yihiin oo hadda xidhan ama wali ku jira qiimayn iyo warbixinno ku saabsan suurtagalnimada waxyeelo rayid ah oo talisku helay intii lagu jiray muddadii warbixinta.
Qiimeyn dhameystiran oo Fiiro gaar ah
Xasuus: Meesha ay eedeyntu ka go'an tahay inay tahay mid aan la xaqiijin, waxay ka dhigan tahay macluumaad aan ku filnayn inay jirto si loo xaqiijiyo ama loo xaqiijiyo warbixinnada ku saabsan khasaaraha rayidka. Markii macluumaad cusub la helo, warbixin ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah dib ayaa loo qiimeyn karaa. Si kastaba ha noqotee, illaa ay taasi dhacdo, qiimeynta waxaa loo tixgeliyaa mid dhammaystiran.
Feb. 18, 2020, (Ahmiyad) Hogaanka Ciidanka mararaykanka ee Africa waxay heshay seddex warbixin oo laga helay ilo warbaahineed oo khadka tooska ah ah iyo koontada baraha bulshada taasoo sheeganeysa in labo (2) qof oo rayid ah ay ku dhaawacmeen duqeyntii Mareykanka ee agagaarka Jilib, Soomaaliya, Feb. 17, 2020. Kadib baaritaan qoto dheer oo ku saabsan xaqiiqooyinka iyo duruufaha daba socday duqeyntii Febraayo 17, 2020, USAFRICOM waxay qiimeysay duqeynta taasoo dhalisay dhaawaca labo (2) rayid ah.
Tirada warbixinnada laga helay eedeynta
warbaahinta internetka & koontada warbaahinta bulshada
Maajo 18, 2020 . (warbixinnada Aan laxaqiijin) Dib u eegis kadib, waxaa lagu qiimeeyay kuwo aan la xaqiijin. Ka soo horjeedka wararka sheegaya in weerarka cirka lagu bartilmaameedsaday hooyo iyo caruurteeda gurigooda, weerarka cirka ee la qaaday Maajo 17, 2020 waxaa lagu bartilmaameedsaday laba xubnood oo ka tirsan al-Shabaab xarun al-Shabaab caan ku ahayd oo kooxdu u adeegsatay qorshaynta weerarada Muqdisho. Ma jirin dad rayid ah oo lagu arkay aagga ama la falgalaya xarunta al-Shabaab. Sirdoonka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in khasaaraha kaliya ee ka dhashay duqeynta ay ahaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, waxaana lagu qiimeeyay kalsooni sare in aysan jirin wax khasaaro rayid ah oo ka dhashay ficilka militariga Mareykanka Intaa waxaa sii dheer, halka laga helayo warbixinnada hore waxaa loo yaqaanaa inay u Shabaab. Al-shabaab, indheeri ah oo qiyaas ah oo la sameeyay ayaa cadaysay ugu yaraan dhowr sawir in si ula kac ah loo bedelay.
Tirada warbixinnadalaga helay eedeynta:
4 tilaa 6
Julaay 29, 2020 (warbixinnada Aan laxaqiijin) USAFRICOM waxay heshay seddex (3) warbixin oo laga helay ilo warbaahineed oo khadka tooska ah ah iyo koonto baraha bulshada ah oo sheeganeysa in ilaa seddex (3) qof oo rayid ah lagu dilay duqeyn cirka ah oo Mareykanku ka geystay agagaarka Jilib, Soomaaliya, markay ahayd Julaay 29, 2020. Dib u eegis kadib, warbixinnada waxaa lagu qiimeeyay kuwo aan la xaqiijin. Ka soo horjeedka wararka sheegaya in weerarka cirka lala beegsaday guri ay ku dhinteen seddex caruur ah, waxaa duqeynta lagu fuliyay 29-kii Julaay, 2020 labo xubnood oo ka tirsan al-Shabaab oo ku sugnaa goob la ogyahay oo shabaab ka tirsan oo loo isticmaali jiray inay ku kulmaan hoggaanka sare ee al-Shabaab. Sirdoonka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in xarunta kaliya ay tagi karaan xubnaha Al-Shabaab, qasaaraha ka dhashay duqeynta ayaa ahaa xubno katirsan Al-Shabaab. Waxaa lagu qiimeeyay kalsooni aad u sareysa in aan wax khasaaro rayid ah ka dhalan ficil militari oo Mareykan ah. Hal ilo ayaa sidoo kale adeegsaday hal sawir oo horey loogu daabacay 2015.
Febraayo 28,2020, Taliska Ciidamada Mareekanka ee Afrika ayaa heley 3 warbixin oo bogga bulshada intarnatka oo sheeganayo in 2 qof oo rayid lagu dhaawacey weerarka cirka dayaaradaha mareekanka agagaarka Qunyo Barawe, Soomaaliya. Febraayo 28 2020 Taliska Cidanmada Mareekanka ee Afrika qiimeentooda ayaa sii socon.
Mudadii u dhaxaysay Maarso 10, 2020 iyo Abril, 1, 2020, Taliska Ciidamada Mareekanka ee Afrika waxay heshey warbixino tiro badan oo laga helay ilo warbaahineed oo internetka ah iyo xisaabaadka baraha bulshada oo sheegaya in afar (4) ama ilaa toban (10) rayid ah lagu dilay duqeyntii Mareykanka ee agagaarka Janaale, Soomaaliya, Maajo 10, 2020. Bisha Maayo 8 2020 ayeey taliska cidamada Mareekanka ku qiimeeyeen in uu waxba kajirin. Taliska ayaa ka heley NGO yada dhacdo la sheegey 15 Maayo 2020 oo sheegayo in duqeen dayaaradah mareekanka lagu diley (6) qof oo madani. taliska cidamada Mareekanka ayaa bogga internedka kahely bisha Junyo 17,2020 oo sheeganayo in (6) qof madani lagu diley duqeen dayaarada mareekanaka. Taliska ayaa heley (6) warbaxin iskumidah buga dhimashada madaniga ee Taliska ciidamada mareekanka ee Afrika, Julaayo 28 iyo 30 2020 oo sheeganayo in duqeenta dayaaradah kudhimatey (6) qof oo madani. Taliska ciidamada mareekanka ee Afrika, ayaa dib u furey keeska ee qiimeenta wey sii socon.
# Tirada warbixinnada laga helay eedeynta:
Meesha ey eeda kasoojeedo
# sheegashada Dhaawaca
# Sheegashada Dilka
Inta u dhaxeyso 2-10
Sebtember 21, 2020 Hogaanka ciidamada maraykanka ee Afrika waxay heshay hal (1) warbixin oo laga soo xigtay ilo warbaahineed oo internetka ah oo sheeganeysa in sideed (8) qof oo rayid ah la dilay sabab la xiriirta wadajirka Soomaaliya / U.S. hawlgal militari oo ka dhacay agagaarka Tortorrow, Soomaaliya markay ahayd Sebtember 21, 2020. Qiimaynta Hogaanka ciidamada mareekanka ee Afrika way socotaa.
#Meesha ey eeda kasoojeedo